Mihanaka ny filalaovana ody sy ny famosaviana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Notsofiny ny tarehiko dia lasany ny volako”, hoy ity ramatoa iray. Tranga fandre tsindraindray izany. Mety fandre matetika anefa io amin’ny toerana sasany. Isan’ny toerana hiriariavan’ireny mpahay io mazia mazia io ny eny amin’ny toby fiantsonan’ny fiara fitaterana tahaka ny eny amin’ny Fasan-karana (izay no fiantso io toerana io) ao Antananarivo. Ny fomba no mety miova. Mety misafo ilay mpanao ny asa ratsy fa tsy mitsoka. Ny vokany mitovy ihany. "Antsiva" no iantsoana an’ireo olona ireo eny amin’ny Fasan-karana. “Mahavariana fa dia fantatr’ireo antsiva ireo ny olona manana lelavola betsaka any aminy”, hoy ity saofera iray. “Samy hafa ny mpanera sy ny antsiva”, hoy izy nanampy. Ary dia notohizany fa samy manana ny fahaizany ry zareo ireo. Misy ny mandre fofona lelavola, ao ny misintona volamena. “Ny ahy izao dia nosafoiny ny tanako dia nomeko azy ny volamena tety amiko ary isan’izany ny peratra mariaziko”, hoy ity ramatoa iray. “Olona tsy fantatro. Olona mbola tsy hitako hatrizay izany no nomeko ny peratro”, hoy izy. Te hilaza izy fa tsy adala akory ka ny peratra mariazy dia omena olona. Saingy... fihetsika adala. Toa nentin-javatra.
Ohatra mifototra amin’ny resa-bola sy volamena ireo. Tsy midika akory izany fa ireo ihany no ahitana na nandrenesana ohatra nitranga teny anivon’ny fiarahamonina. “Ny azoko tantaraina anao dia izay nahazo ahy”, hoy ity namana iray. “Mpikotrana itony haiady itony ny namako, ary mahafehy izany, dia noheverin’ny adva (TTF : mpifanandrina) fa izaho koa izany mahavoa. Izaho no kelikely taminay mpinamana ireo. Nandefasan-dry zalahy maître iray aho ary nopehany ny soroka fa tena ny alin’iny dia tena nalemy ny ilan’ny vatako mifanandrify amin’ilay nopehan’ilay maître”, hoy Ranamana nanazava. Kisendrasendra ve ? Mihevitra ity mpitantara fa hafatra natsipy taminy sy ireo namany izany; mampitandrina fa raha mahavoa kotrana ianareo ireo, ny aty kosa manana tombony dia ilay hery miafina izany. Moa tsy izay ihany koa ve ny eritreritra mandalo rehefa mandre ny zava-bitan’i Maître PierreBe ? Tsy milaza akory isika eto fa nanao asa maizina ity olona ity.
“Tratry ny masobe tsy mahita izy. Ireo mpanao mena mahazo dia isan’ny tena mampiasa io maso be tsy mahita io", hoy ny olona iray. Marihina fa maro ireo manao ity mena mahazo ity eny amoron’ny farihin’Anosy, ao an-drenivohitra ao. Mena mahazo moa no iantsoana azy na dia efa novain-dry zareo ho maty indray no mahazo amin’izao fotoana izao. "Jereo anie fa efa karatra roa sisa no eo mbola tsy hitanao ihany ilay karatra ametrahana ny vola mba hahazoana", hoy ny mpijery iray. Resy lahatra izy fa misy fandraikiraikena ao. Ka ny fandraikiraikena ve midika ho mosavy? Sa rehefa tsy voazavan’ny saina "miketrika" dia mosavy? Tao ny resaka Tokanono izay nosamborin’ny FIS notarihin’ny Colonel Lylison. Tao ny resaka ambalavelona sy Cohen Rivolala. Tao ny resaka mpivarotra enta-madinika manao fandriro-barotra, ka mahasarika olona kanefa dia olona miavona tsy misy tahaka izany ilay mpivarotra.
Ny tontolom-piainana rehetra dia ahitana io resaka mosavy io. Tafiditra ao anatin’izany ny tontolo politika. "Io indrindra aza no tena misy resaka maloto", hoy ity mpanara-baovao. "Izay fitondrana nifanesy teto dia ahitana resaka mpimasy avokoa", hoy izy. Na tany amin’ny fitondrana talohan’ny fanjanahantany izany, na ankehitriny efa ao anatin’ny demokrasia. Tamin’ity taona 2016 ity, dia nisy ny mpanao politika no nitarika ny vahoaka malagasy hivavaka amin’ny alina ary voatondro mazava ny ora satria "devoly", hoy izy, no atrehana amin’izao tolona politika atao izao. Misy ny milaza fa manana mpanao fanafody mahery ny mpitondra ankehitriny ka io no mahatonga ny vahoaka tsy ho rototra na dia hita aza ny tsy fetezan-javatra ankehitriny.
Fa samy nanana ny laza ratsiny ireo mpitondra nifandimby. Raha vao miresaka bibiolona, dia fantatra avy hatrany ny ao ambadik’izany. Raha vao osy mainty no tononina dia efa fantatra: iza ny mpanao politika tenenina fa miompy izany. Ngovitra ve no lazaina? Anarana re faha-Repobilika faharoa izany.
Tsiahivina fa nisy ny valan-dresaka nataon’ny pasitera Andriamanjato Richard nilaza fa ny filoha Ravalomanana dia nanao fifamatorana tamin’i Satana. Ny olona nanao ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety dia nanana ny lazany, noheverina fa olona manam-pahaizana sy fahendrena. Ny toerana nanaovany izany koa dia mifamatotra amin’ny fiangonana kristianina. Ka marina ve ny nambarany eo anatrehan’izany rehetra izany ? Sa... Nentin-javatra izy nanao ny valan-dresaka ?
Maro ireo singa nanehoan’ny mpanao politika fa mampiasa na matahotra io resaka mosavy io izy ireo. Isan’ny nahitana izany ny fitondran’izy ireo mpiandry rehefa hiditra amin’ny toerana iray ka nipetrahan’ny mpifanandrina politika izay lasa ho fahavalo politika tsotra izao. Ilay famosaviana (sorcellerie) izany navadika ho fanapoizinana (empoisonnement). Dia tsiahivina eto izany fa raha nandeha nivory tany Maputo ny filohan’ny Tetezamita, Andry Rajoelina, dia nentina avy aty Madagasikara ny sakafony. Ahiahy ? Fahamalinana ? Asa izay tena antony. Soritana fa misy ireo firenena lehibe ireo no mitondra ny sakafo na rano ho an’ireo atiletany rehefa manao fifaninanana goavana. Matahotra mosavy ve ? Mosavy sa fanapoizinana no nahafaty ilay minisitra maty vao haingana teo ? Aleo lalovana fotsiny fa loza ho an’izay mampiditra ahiahy…
Tsy eto Madagasikara ihany
Tsy tranga iainana eto Madagasikara irery hatreto ity resaka famosaviana ity na fananana mpimasy na mpitaiza. Misy rohy ahitanao ireo mpitondra afrikanina folo voalohany raha ny fampiasana mpitaiza no hikilasiana azy ireo. Ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Les 10 chefs d’Etat les plus accros aux marabouts” dia ho hitanao ao amin’ny www.lakroa.mg.
Fa etsy andanin’izany, mba ahoana ny amin’ireto hain-trano maro manerana ny Nosy ireto ? Raha nivory tao Antananarivo ireo mpikambana ao anatin’ny ANTM (Association Nationale des Tradipraticiens Malagasy) dia namaly ny maro tamin’izy ireo fa mpitsabo ry zareo ka tsy manan-kevitra momba io hain-trano be dia be io. Misy ihany no milaza fa vokatry ny fifanarahana maizina tsy voahaja. Iza no tsy nanaja ilay fifanarahana ? “Tsy maintsy mpitondra firenena io tsy nanaja ny fifanarahana io matoa manerana ny Nosy ny hain-trano”, hoy i Neny, iray amin’ireo mpitaiza ireo. “Maro aminay no nomena fahaizana manokana hanasitrana ny aretin’ny fiarahamonina. Saingy… Rehefa tsy hitanay ny niavian’ny olana na ny nametraka ilay zavatra mitarika aretina dia tsy hita ny fanefitra atolotra”, hoy ihany izy. Nambarany fa tsy mitazam-potsiny izy ireo. Fa dia izany mbola mandresy izany ny ratsy hatreto. Ankoatra izany rehetra izany, soritana fa efa misy koa izao ireo vahiny milaza fa afaka mamaha ody ratsy sy fanahy ratsy ary manao dokam-barotra amin’ny haino aman-jery sy gazety maro eto an-toerana. Dia misy tokoa ireo mitoky amin’izany.
Santionan-dresaka avy aminareo namana sy valiteny avy amin’ny mpiara-monina nametrahana ny fanontaniana ireo nangonina ireo. Ka ahoana hoy ny Fiangonana ? Tantara mitohy.